Ambohijatovo : inefatra nesorina ireo 4’mi | NewsMada
Ambohijatovo : inefatra nesorina ireo 4’mi
Niverina indray ireo olona tsy manan-kialofana mitoetra etsy ambanin’ny Jirama Ambohijatovo. Voatery noravain’ny sampan-draharahan’ny sosialy sy ny polisy monisipaly ireo trano baoritra valo sy trano fanitso iray.
Nanaiky niala avokoa izy ireo saingy nilaza fa hiverina raha vao lasa ny mpiasan’ny kaominina. Faninefatra raha kely indrindra ny nandravana ireo trano tsy ara-dalàna ireo ka voatery nandray fepetra ny tompon’andraikitra.
Hisy ny fanaraha-maso aorian’izao hetsika izao hisorohana ny mety hiverenan’ny hafa. Efa misy rahateo moa ny toerana voatokana ho azy ireny eny Isotry saingy miverina eo hatrany ireo tsy manan-kialofana ireo izay sady manao asa ratsy toy ny fanendahana ny mpandeha sy ny fampiantranoana ireo mpivarotena.
Misy mampanofa trano baoritra ireo mpivarotena mihitsy ny sasany, ka lasa fitadiavam-bola ny fipetrahana eo amin’iny faritry ny Jirama iny.